Sacuudiga oo laga helay qofkii ugu horeeyey ee qaaday cudurka Coronavirus | Dhexnimo Media
Home Wararka Sacuudiga oo laga helay qofkii ugu horeeyey ee qaaday cudurka Coronavirus
Sacuudiga oo laga helay qofkii ugu horeeyey ee qaaday cudurka Coronavirus
Wasaaradda Caafimaadka ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa shaacisay in kiiskii ugu horeeyey cudurka coronavirus ah laga helay muwaadin Sucuudi ah.
Sacuudiga ayaa sheegay in ninkan uu ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Iran oo cudurkan uu si weyn ugu faafay, isagoo soo maray dalka Baxreyn.
Ninkan ayaa la sheegay in markii la ogaaday inuu qabo fayraska, waxa la dhigay isbitaal lagu karantiilay waxaana la siinayaa daryeelka caafimaad ee lagama maarmaanka ah iyada oo la raacayo habraacyada loogu talo galay sida ay sheegtay Wasaaradda caafimaadka ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Wasaaraddu waxay u xaqiijisay dadweynaha in mas’uuliyiintu ay hadda baarayaan qof kasta oo uu xiriir la sameeyey qofka la karantiilay si loo hubyo iney cudurka qaadeen.
Afhayeen u hadlay wasaarada caafimaadka sacuudiga ayaa sheegay in Boqortooyada ay si buuxda ugu diyaar garowday cudurkan isla markaana ay diyaarisay 25 Isbitaal iyo 8,000 oo sariirood si ay wax uga qabtaan kiisaska cudurkan haddiiba uu ku faafo dalkooda.
Sacuudiya Carabiya ayaa ku dhawaaqday Khamiista iney si KMG ah uga joojisay viisaha cumrada iyo dalxiiska ee dalkaas illaa hadda lagu arkay cudurkan, waxaana ka mid ah Wadamadaas Afghanistan, Azerbaijan, China, Hong Kong, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Kazakhstan, Macau, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Syria, Taiwan, Thailand, Uzbekistan, Vietnam, Yemen iyo dalka Somalia oo aan weli lagu arkin cudurkan, dad badana la yaabeen sababta uu Sacuudiga ugu soo daray liiskan.
Previous articleFaatima Cawaale Cusmaan oo shaacisay iney xilka iscasishay & Xog ku aadan sababta
Next articleWararkii Ugu Dambeeyay xaalada Balad Xaawo iyo halka ay ku dambeeyeen Ciidankii Jubbaland